Markale jadwalkoodii wuu fashilmay
Dib u dhac kale ayaa ku yimid jadwalka doorashada oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal, kaasoo waqti u qabtay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Gudiga la isku haysto ayaa horay u soo saaray jadwalka doorashada ee 23-ka Disember, 2020, kaas oo dhigayay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay soo saari doonaan liiska musharixiinta Aqalka Sare 29-ka Diseembar, iyo in 31-ka Diseembar, 2020-ka illaa 6-da Janaayo 2021 ay dhacdo doorashada Aqalka Sare.
Gudiga ayaa kadib soo saaray jadwalka labaad 29-kii bishii Diseembar, iyagoo ku sababeeyay isbadal lagu sameeyay jadwalka kadib codsi ka yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo codsaday in fasax la siiyo
Guddigu wuxuu aqbalay codsiga, isagoo soo saaray jadwal labaad, kaasoo qeexayay in doorashada Aqalka Sare ay dhacdo 7-14 Janaayo 2021, iyadoo waqtiga loo qabtay uu ku egyahay maanta, laakiin kuwani ma dhicin.
Ilaa iyo hada jadwalkii iyo hanaankii ay soo saareen gudiga ayaan la dhaqangelin, waana markii labaad oo qorshahan uu fashilmo sababo la xiriira is afgaran waa ka taagnaa hirgelinta hanaanka doorashada ee u dhaxeysay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland.
Dowladda Federaalka ayaa dhawaan shaacisay in doorashada ay dhaceyso, kadib kulan ay yeesheen Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka iyo saddexda Dowlad Goboleed ee siyaasad ahaan taageersan Federaalka, kuwaas oo kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle.